व्यवसायमा असर परेको भन्दै इटहरीको विराटनगरलाइनमा बाँसको बार लगाई सडक अवरुद्ध
६६१ पटक पढिएको
इटहरीः अहिले कोसी राजमार्गको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत इटहरीमा ६ लेन सडक परियोजनाको काम भइरहेको छ ।
सडक विस्तारको काममा ढिलासुस्ति भएकै कारण इटहरीवासी सवारी जाम र धुलो धुँवाबाट पीडित बनेका छन् । काममा ढिलासुस्ति गरेकै कारण आफ्नो व्यवसायमा असर परेको भन्दै मंगलबार विराटनगरलाइनमा व्यवसाय गर्ने व्यवसयीहरुले बाँसको बार लगाएर सडक अवरुद्ध गरेका छन् । सडकको काम सुस्त हुँदा पनि स्थानीय तहबाट कुनै पहल नभएकाले सडक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा व्यवसाय नै चलाउन गाह्रो छ । धुलोले गर्दा ग्राहक नै आउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले नगरपालिकालाई कर कसरी तिर्नु ? घर भाडा कसरी तिर्नु ? घरभेटी र नगरपालिकाले सडक विभागसँग छलफल गरोस् । यदि गर्न सक्दैन भने सरकारले भएजति सबैलाई रोड बनाओस् । हाम्रो माग छिटो पिच गर्नुपर्यो र यो ठाउँलाई धुलोमुक्त गर्नुपर्यो भन्ने हो’, विराटनगर लाइनमा व्यवसाय गर्ने एक जनाले भने ।
‘हामी धुलोमुक्त हुन चाहन्छौँ’, अर्का व्यवसायीले भने, ‘हामीले नगरपालिका र सडक विभागलाई पटक पटक भनेका छौँ । तर, यो सडकमा पानी हालेर हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने कामबाहेक केही गर्न सकेको छैन । कि दिनमा चार पटक पानी हाल्नुपर्यो, कि भएको ठाउँमा पिच गर्नपर्यो । होइन भने हामी भोलि फेरि दुवैतर्फ बाटो अवरुद्ध गर्छौँ ।’ उनले यो समस्याले व्यापारसँगै मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पारेको बताए । यहाँका व्यवसायीहरुले स्थानीय तहले साथ नै नदिएको भनिरहँदा वडा नम्बर ९ की वडा सदस्य कुमारी न्यौपानेले आफूहरुले स्थानीयको समस्यामा हातेमालो गर्दै आएको जानकारी दिइन् । ‘यो जुन काम भइरहेको छ, यसले स्थानीयसँगै हामीलाई पनि मार परेको छ । र, यसको विषयमा हामीले बारम्बार पहल गरिरहेका छौँ । हाम्रो कुरालाई ध्यान दिएर नगरपालिकाले पानी हाल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सडक विभागले भने हाम्रो कुरालाई कुनै वास्ता गरेको छैन । हामीले फोन गर्दा पनि उहाँहरुको फोन नै लाग्दैन’, न्यौपानेले भनिन् ।
साथै उनले स्थानीयको अन्दोलनमा वडाको पनि साथ रहेको जानकारी गराइन् । विराटनगरलाइनको राधाकृष्ण मन्दिरअगाडि एकतर्फी बाँसको बार लगाएर बाटो अवरुद्ध गरेपछि सवारीसाधनहरु इटहरी चौकबाट बीपी चौक हुँदै विराटनगर जाने र उताबाट आउने सवारीसाधनहरु पनि त्यही रुट भएर आवाताजावत गरेका थिए । झण्डै एक घण्टा जति जाम भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय र ९ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष भूपेन्द्र वरालको नेतृत्वमा सडक खुलाइएको थियो ।
लहानः आफूलाई पढाउने शिक्षकलाई तलब दिलाउन विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । विद्यार्थीहरूले शिक्षकला ...
फेसबुकले समाचार सामग्रीमा १ अर्ब डल ...